Al-Shabaab oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababaha marar badan keenay in Dab lagu gubbo Suuqa Bakaaraha iwm!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Al-Shabaab oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababaha marar badan keenay in Dab lagu gubbo Suuqa Bakaaraha iwm!!
Al-Shabaab oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababaha marar badan keenay in Dab lagu gubbo Suuqa Bakaaraha iwm!!
Mar 02, 2017WARAR
Xarakada Al-Shabaab ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo dabkii labo maalin ka hor ka kacay Suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho, kaasoo sababay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed.
Sheekh Cali Maxamed Xuseen oo ah Wakiilka Al-Shabaab ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay in aysan aheyn markii u horeysay oo Suuqa Bakaaraha ka kaco dab, isagoo shaki geliyay gubashada markan ka dhacday Suuqa.
Waxaa uu sheegay in markii u horeysay aysan aheyn oo Suuqa Bakaaraha gurbto, isagoo tilmaamay in dhibaatadan ay tahay waxay Insaanku gacantooda ku kasbadeen.
“Shaki badan ayaa ka qabnaa in dhinacyo cadow ah ay mas’uul ka ahaayeen dabka suuqa bakaaraha, sida ogtihiin labo bilood ka hor dab ayaa ka kacay suuqyo ku yaala Dharkeenley Suuq Boocle, Suuq Bakaaro iyo Baydhabo”ayuu yiri Cali Maxamed Xuseen.
Wakiilka Al-Shabaab Gobolka Banaadir ayaa sheegay in baaritaan lagu sameeyo gubashada Suuqa Bakaaraha, si loo ogaado sababta dhabta ah ee ka dambeysay dabkan.
Dad fara badan ayaa ku hanti beelay gubashadii maalmo ka hor ee Suuqa Bakaaraha, waxaana illaa iyo hada lagu sameyn tirakoob rasmi ah oo ku saabsan hanti’ada ku baaba’day Suuqa.
Previous PostMadaxweyne Gaas oo Dab ku shiday Xaalada Boosaaso yirina N Xarrago Waa Shabaab !! Next PostJabhad soo dagaalameysay muddo nus qarni ka badan oo go’aansatay inay hubka dhigtaan Daawo Sawirro!!